Wɔda Bible No Edzi Wɔ Ɔkwan Soronko Bi Do Wɔ Rouen, France
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bicol Bislama Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Finnish French Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kabyle Kannada Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Krio Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Maya Mfantse Mingrelian Mixe (North Central) Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Oromo Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tahitian Tajiki Tarascan Telugu Tigrinya Tlapanec Tojolabal Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Valencian Vezo Welsh Xhosa Zapotec (Isthmus) Zulu
Wɔda Bible No Edzi Wɔ Ɔkwan Soronko Bi Do Wɔ France
Nserahwɛfo mpempem a wɔbaa 2014 Amanaman Ntamu Eguadzi-Yikyerɛ bi a wɔyɛɛ no wɔ Rouen a ɔwɔ France etsifi afamu no enyi bɔɔ eguadzibea hɔ ɔfã bi a ɔtwẽe hɔn adwen paa. Asɛntsir a nna woeyi no edzi nye yi: “Bible No​—Ndeda, Ndɛ, nye Ɔkyena.”
Wɔdze TV akɛse a ɔbobɔ hɔ no yii video a ɔfa tsetse Bible nsaano nkyerɛwee no ho, na iyi twetwẽe nserahwɛfo no dodowara. Sɛ nserahwɛfo no wura dɛm bea yi a, wonya hokwan suã iyinom fa Bible no ho: mfaso a ɔwɔ no mu afotu do, mbrɛ no mu abakɔsɛm yɛ nokwar, mbrɛ ɔnye nyansahu hyia, nye mbrɛ wɔakyekyɛ no wɔ wiadze nyina no.
Yikyerɛ yi so daa mbrɛ Bible no esi atsena hɔ mber tsentsenntsen ɔmmfa ho mbɔdzen a asoɛrtsiafo abɔ dɛ wɔbɛsɛɛ no no edzi. Afei so ɔdaa no edzi dɛ, seseiara nyimpa pii nsa tum kã dza woetsintsim nye elɛtrɔnik dze ahorow nyina kenkan. Nserahwɛfo no nyaa New World Translation, Bible nkyerɛase bi a Jehovah Adasefo etsintsim wɔ kasa bɔbor 120 mu no bi kwa.
Nserahwɛfo no mu pii kyerɛɛ anamɔn a Adasefo no etu mbrɛ ɔbɛyɛ a afofor benya Bible no bi ho enyisɔ. Aber a ɔbaa bi a ɔyɛ edwuma dze boa mbabun a hɔn ebusua dzi hia no nye mbabun bi rohwɛ ndzɛmba a wɔada no edzi no bi no, ɔkãa dɛ: “Bible no yɛ hɛn nyinara hɛn egyapadze tsitsir. Ɔyɛ nwoma a tum wɔ mu. Aber biara a mebɛkenkan no, minya me haw ahorow n’ano edur.”
Ɔyɛɛ ɔbaa bi a oedzi mfe 60 a ɔwɔ mbanana no nwanwa dɛ obotum enya Bible no bi kwa. Ɔkãa dɛ: “Ɔsɛ dɛ hɛn nyina hyɛ ase kenkan Bible no bio osiandɛ hɛn nyinara hia!”
Ebɛnadze ntsi na New World Translation no yɛ soronko fi nkyerɛase afofor pii ho?
Fa mona Fa mona Wɔda Bible No Edzi Wɔ Ɔkwan Soronko Bi Do Wɔ France
Nyimpa A Wɔdɔ Asomdwee Hyia Mu Wɔ Armada No Ase